Chọpụta ụzọ nke ụlọ Loire na France | Bezzia
Utezọ nke ụlọ Loire na France
Susana Garcia | 28/04/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
Ọ bụrụ n’ịchelarị maka njem ọzọ ị ga - eme, ị gaghị echefu ụfọdụ atụmatụ anyị. E nwere ebe ndị ga-eju anyị anya mgbe niile, ebe ọ bụ na o yiri ka ha sitere na akụkọ. Routezọ nke nnukwu ụlọ nke Loire Valley na France Ọ bụ otu n'ime saịtị ndị ahụ na-anaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya na ịtụnanya ụzọ gasị na ike ga-mere na France maara ebe jupụtara castles nke ịrịba mma.
Mgbe anyị na-ekwu maka ụlọ ndị Loire Anyị na-ekwu okwu banyere ụlọ ndị a dị na etiti etiti nke Osimiri Loire na etiti France. Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a sitere na Middle Ages, wuru dị ka ezigbo ebe ewusiri ike, ọ bụ ezie na e mekwara chateaux, bụ ndị e mere maka ebe obibi maka ndị a ma ama. Taa ụlọ ndị a bụ akụkụ nke World Heritage Site.
1 Kwadebe ọbịbịa gị
2 Lelọ nke Sully-sur-Loire
3 Clọ Chenonceau
4 Blọ Chambord
5 Illọ Villandry
6 Lọ Chaumont
Kwadebe ọbịbịa gị
Na mpaghara Loire Valley anyị nwere ike ịchọta ihe karịrị ụlọ iri ise, nke na-eme ka o sie ike ịhụ ha niile. Ọ bụ ya mere ihe a na-ejikarị eme bụ ndepụta nke ụlọ ndị nwere nnukwu mmasị, na-eme ụzọ iji kpuchie ha. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu dị n'etiti obodo Angers na Orleans, yabụ ụzọ a na-esikarị n'otu gaa na nke ọzọ. Na oge kacha mma bụ n'oge opupu ihe ubi na ọdịda, mgbe ihu igwe dị mma, ebe ọ bụ na ịnweghị ike ịga na ụlọ ndị ahụ, kamakwa gburugburu ya na oke ọhịa, ubi ma ọ bụ ubi vaịn.
Lelọ nke Sully-sur-Loire
Nke a na narị afọ nke XNUMX nnukwu ụlọ bụ otu n'ime ndị kasị ọma-eji dị ka ebe e wusiri ike na-alụ agha. Moat gbara ya gburugburu ma ị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ ya ma ọ bụ banye n'ime ka ị hụ ili nke Earl nke Sully ma ọ bụ osisi ochie nke narị afọ nke XNUMX.
Nke a bụ otu n’ime ụlọ ndị mara mma na Loire yana otu n’ime ewu ewu. Ọ bụ a Centurylọ elu narị afọ nke XNUMX a maara dị ka 'ụlọ nke ụmụ nwanyị' n'ihi mgbanwe ndị ụmụ nwanyị dị iche iche mere ya n'oge na-adịghị anya. O nwere otu n'ime ime ahụ kachasị mma ma nwee ọmarịcha mma na mpụga ya na ụda ya na-acha ọcha, turrets na ubi. Ọzọkwa, nchịkọta ihe osise dị mkpa nke ndị na-ese ihe dịka Rubens ma ọ bụ Murillo na-echere anyị n'ime.
Nke a bụ ụlọ ama ama ama ama ama ama ọzọ ebe ị ga-ahụ ụzọ mbata tupu ị ghara ịhapụ ya. Eze Francis nke Mbụ ji mara mma ọhịa gbara ya gburugburu ichu nta ọ bụkwa otu n’ime ndị kasị ibu na Osimiri Loire nwere ihe karịrị narị ụlọ anọ. Ọ na-enye anyị ezigbo ihe atụ nke French Renaissance ma nwee nnukwu steepụ n'ime nke ha na-ekwu na ọ bụ Leonardo da Vinci mere ya.
Kacha mara mma ubi nke ụlọ ndị nke Loire dị ka a hụrụ ya na Castle of Villandry. Nke a nnukwu ụlọ e wuru n'oge Renaissance na nwere nnọọ nnukwu na n'ezie ịtụnanya n'ubi ndị na-otu n'ime ihe ndị kasị mma na France. Ha nwere usoro na gburugburu dị iche iche na ọkwa atọ.
Achọtara nke a na ihe ndị ọzọ dị mkpa nke anyị na-agaghị asọfere. Castlọ a bụ nke Catherine de Medici ma bụrụ wuru na XNUMXth na XNUMXth century. Ọ bụ nnukwu ụlọ nke nwere ụdị osisi Bekee na ọrụ nka. Ọ bụ a pụtara weghachiri ulo-elu na akara akara elu reminiscent nke ndị ahụkarị fairytale castles. Na mgbakwunye, site na mbara ala ị nwere ike ịhụ ọmarịcha panoramic nke ndagwurugwu Loire.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Utezọ nke ụlọ Loire na France
Isi yabasị, olee otu m ga-esi kpochapụ ya nke ọma?
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye gị ejighị gị kpọrọ ihe